डेनमार्कको राजनीतिमा पखेटा हाल्दै नेपाली युवा :: Setopati
प्रकाश सापकोटा डेनमार्क
आगामी नोभेम्बर २१ तारिखका दिन डेनमार्कमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा एक नेपाली युवाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चितवनको भरतपुर नगरपालिका-२२ बाट सन् २००८ मा अध्ययनका लागि डेनमार्क आएका हरिप्रसाद न्यौपानेले कोपनहेगनको वडानम्बर ६ विस्पेबिया क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन्।
डेनमार्कको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको लागि उम्मेदवारी दिने न्यौपाने इतिहासमै पहिलो नेपाली हुन्। चुनाब जितेमा उनी यहाँको स्थानीय तहको नीति निर्माण तहमा पुग्ने उनी पहिलो नेपाली हुनेछन।
नेपाल हुँदादेखि नै राजनीतिमा निकै चासो राख्ने न्यौपाने डेनमार्कको ठुलो पार्टी सोसल डेमोक्र्याट पार्टीबाट सो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि चुनिने अपेक्षा सहित उम्मेदवारी दिएका हुन। डेनमार्कका नेपालीहरु बीच निकै लोकप्रिय न्यौपाने अभियान नेपाल नामक नेपाली सामाजिक संस्थाका पूर्व कार्यक्रम संयोजक, नेपाली कलाकारहरुको संस्था इनास डेनमार्कका पूर्व प्रबक्ता लगायतमा सक्रिय सामाजिक अभियानताका रुपमा परिचित छन्। न्यौपाने हाल डेनमार्कमा सरकारी कम्पनीमा ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, डेनिसबाट नेपाली, हिन्दि, उर्दु भाषाको दोभासे तथा कोपन्हेगन नगरपालिकाको भाषा पाठ्शालाहरुमा सिकारुका अनुभव संकलन गर्ने 'मेन्टर' का रुपमा कार्यरत छन्।
डेनमार्कको सबैभन्दा ठुलो पार्टी सोसियल डेमोक्र्याट्सको सदस्यता सन् २०१२ मा लिएका न्यौपानेले सो पार्टी छान्नुको पनि कारण छ। आप्रवासीहरुको पक्षमा वकालत गर्ने ठुलो पार्टी हो, सोसियल डेमोक्र्याट्स। राजनीतिमा अभिरुचि भएका न्यौपानेको डेनमार्कमा अध्ययनको विषय पनि 'लिडरशिप' अर्थात् नेतृत्व बारे नै पर्यो। डेनिस भाषा राम्रो बुझ्न थालेपछि उनले अनलाइनमा उपलब्ध हुने राजनीतिक सामाग्रीहरु खोजी खोजी पढ्न थाले। भन्छन- शुरुवात त गुगल खोजीबाटै गरें। पढ्दै, बुझ्दै जाँदा आप्रवासीको हक र हितका लागि अरुभन्दा बढी झुकाव राख्ने सोसियल डेमोक्र्याट्स पार्टी उनलाई पन पर्यो र त्यसको सदस्यता लिए।
खेलकुद, सामाजिक, संस्कृतिक, अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा दिलोज्यानले लागिपर्ने बानीका न्यौपाने समाजमा बिस्तारै चिनिंदै र चर्चा बटुल्दै गए। पार्टीले पनि उनलाई आप्रवासीका गतिविधिमा भिजेको व्यक्तिका रुपमा चिन्यो।
विश्वभर आप्रवासी नीतिमा कडाइ हुँदै गएको सन्दर्भमा डेनमार्कको सोसियल डेमोक्र्याट्सले पनि आप्रवासी प्रतिको दृष्टिकोणमा केहि साँघुरोपना अपनाउन लाग्यो। त्यसका बिरुद्ध न्यौपाने
पार्टीभित्रबाटै खुलेर प्रस्तुत भए। अहिले पार्टीभित्र अलग विचार राख्ने खरो व्यक्तिका रुपमा चिनिएका न्यौपाने कमसेकम आफू बसेको क्षेत्रका आप्रवासीका हक र हितमा नीति निर्माण गर्न आतुर भए। आफ्नो क्षेत्रको जनसंख्याको अध्ययन गरे। जनसंख्याको ५६% देखि ६०% सम्म मात्र मत खस्ने स्थानीय निर्वाचनमा २ हजार मत पाएमा सिट सुरक्षित हुने देखियो। ५० हजार जनसंख्या भएको विस्पेबिया क्षेत्रमा १२ देखि १५ सय नेपालीबाट र १ हजार जति विदेशीबाट भोट पाउने आंकलन गरे। जितेर आप्रवासीका हक र हितमाथि हुन लागेका प्रहारहरूको थुनछेक गर्ने आँट पलायो। र, उम्मेदवारी दर्ता गराए।
कस-कसले भोट दिन पाउँछन ?
प्रत्यक ४ - ४ वर्षमा हुने डेनमार्कको स्थानीय निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर नाघेका र ३ वर्ष भन्दा बढी डेनमार्क बसोबास गरेका स्वदेशी वा बिदेशी हरेक नागरिकले भोट दिन पाउँछन। यस हिसाबले जुनसुकै 'स्ट्याटस' मा डेनमार्क बसेका ३ वर्ष अबधि पुगेका १८ वर्ष माथिका नेपाली र अन्य विदेशी एबम आप्रवासीहरुले समेत मतदानमा भाग लिन पाउनेछन। भिजिट भिसामा डेनमार्क प्रवेस गरेकाहरु बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट आएका वालिग नागरिकले मन परेको पार्टीको सदस्य समेत बन्न पाउने प्रावधान छ।
मतदानका लागि बिरामी, असक्त अर्थात मतदानस्थलमा जान नसक्नेहरुका लागि समेत विशेष व्यबस्था हुन्छ।मतदान केन्द्रमै गएर तथा चिठी मार्फत गरी दुइ किसिमबाट मतदान गर्न पाइन्छ। अनलाइन भोटिंगको भने व्यबस्था छैन।
यसवर्ष आगामी अक्टोबर महिनाको १० तारिखदेखि पत्रमार्फत मतदान गर्न पाइने कुरा न्यौपानेले प्रष्ट पारेका छन्। घरकै पत्र मन्जुषामा प्राप्त हुने मतपत्र वा कोपन्हेगनको मुख्य नागरिक सुबिधा केन्द्र (Citizen Service Centre) मा उपलब्ध हुने मतपत्रमा आफूले चुनेको व्यक्तिलाई मतदान गरी सो केन्द्रमा बुझाउने व्यबस्था मिलाइएको हुन्छ। अक्टोबर २४ देखि कोपन्हेगनका अन्य नागरिक सेवा केन्द्रहरुमा पनि मतदान गर्न पाइन्छ। कोपन्हेगनका १२ वटा क्षेत्रमा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा भोट हाल्न सकिने छ।
न्यौपानेको भनाईमा डेनमार्कको स्थानीय निर्वाचनमा ५६ देखि ६० प्रतिशत मात्र मत खस्ने गरेको इतिहास छ। यसो हुनुमा स्थानीय निर्वाचन त्यति ठुलो चासोको बिषयको रुपमा मतदातालाई बुझाइएको हुँदैन। डेनमार्कको संसदीय निर्वाचनमा भने ८० प्रतिशत माथि मत खस्छ।
एक नेपाली युवाले इतिहासमै पहिलोपटक डेनमार्कको राजनीतिमा उदाउने अभ्यास गरेकोप्रति नेपालीहरुको चासो र गर्व बढ्नु स्वाभाविक कुरा हो। बिभिन्न कार्यक्रमहरु, खेलकुद, समाजसेवाका कामहरुमा नेपालीहरु माझ मज्जैले भिजेका न्यौपानेलाई योग्य नेपाली मतदाताले त मतदान गर्ने नै अपेक्षा छ, न्यौपानेको।
गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत डेनमार्कका नेपाली सामाजिक, राजनैतिक संघ-संस्था संग सहकार्य गर्दै चुनावी अभियानमा लाग्ने जमर्को गरिरहेको उनले खुलाए। त्यस्तै भारतीय, बंगलादेशी, सोमालियाली, पाकिस्तानी लगायत अन्य देशबाट डेनमार्क आई बसोबास गरेका नागरिकहरुको भेला, समारोहहरुमा आफ्ना आप्रवासी हितका योजनाहरु लिएर जाने तरखर पनि छ। त्यसै पनि दोभासे, सेवा प्रदायकका रुपमा बिभिन्न कार्यक्षेत्रमा भेटिएका व्यक्तिहरु संगको सम्बन्धले पनि न्यौपानेलाई जितको आशा जगाइदिएको छ।
२ हजार मत पुर्याउन सके प्रतिनिधि चुनिने निश्चित रहेको न्यौपानेको आंकलन छ। नेपाली मतदाताबाटै लगभग १५सय मत पाउने र बिदेशीबाट एक हजार मात्र मत पाए पनि २५ सय भन्दा धेरै मत पाउने सम्भावना उनले देखेका छन।
अर्कातिर पार्टीभित्र रहेर पार्टीले आप्रवासी नीतिमा कडाइको वकालत गरेको सन्दर्भमा अलग धार खडा गरेर त्यसमा अडान लिएकाले पार्टी भित्रको एक खेमा त्यसको समर्थनमा उभिएको न्यौपानेले बताएका छन्। सो आधारमा पनि उनले राम्रो भोट हासिल गर्ने अनुमान छ।
जिते के हुन्छ?
"पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा त आप्रवासीको हक र हित नै मेरो प्राथमिकता हो"- न्यौपाने प्रतिबद्ध छन्। उनले जितेमा पार्टीले विदेशीलाई हेर्ने नीति आप्रवासीमैत्री बनाउनेमा उनले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछन। यो डेनमार्कका समस्त आप्रवासीहरुका लागि हरियो बटनको संकेत हुनसक्छ।
नेपालीहरुको हकमा पनि न्यौपानेका बिशेष योजना छन्। सुनाउँछन- नेपाली समाजको लागि एउटा साझा घर 'नेपाल हाउस' स्थापना गर्ने, नेपाली सांस्कृतिक केन्द्रको स्थापना गर्ने, नेपाली समुदायका लागि नियमित रेडियो कार्यक्रमको पहल गर्ने, नेपाली हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र स्वरुप एक हिन्दु मन्दिरको स्थापनाको पहल गर्ने लगायतका कामहरु प्राथमिकतामा छन्।
अध्ययन, स्वास्थ्य लगायतका समुदायको विकाशका लागि ल्याइएक परियोजनाहरू नेपाली समुदाय तिर तान्न पनि कोसिस रहने उनले थपे। त्यस्तै विशेषत: कामका सिलसिलामा डेनमार्क आइपुगेका नेपालीहरुका लागि सम्भावित कामका क्षेत्र र अवसरबारे सचेत गराउने 'जब एजेन्ट' का रुपमा समेत आफ्नो भूमिका सक्रिय रहने पनि बिश्वाश दिलाए।
इतिहासमै एउटा नेपाली युवा युरोपको एक सम्पन्न मुलुकको राजनीतिमा उदाउने कुराले नेपालीहरुलाई गौरवान्वित गराउने नै भयो। उनले जितेर नीति निर्माणको तहसम्म पुगेमा नेपाली समुदायका लागि केहि न केहि त अवश्य गर्लान। नेपालकै राजनीतिमा पनि उनले युरोपको सिकाईको अनुभव बाँडलान। आप्रवासीको हित त उनको राजनैतिक एजेन्डा नै भै गो, माइतिको मायामोहले पनि नेपाल र नेपालीका लागि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हित गर्लान। यस मानेमा डेनमार्कको स्थानीय निर्वाचनमा न्यौपानेको उम्मेदवारी नेपालीका लागि अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ र जितको लागि शुभकामना दिनैपर्छ।
तस्वीर: सिक्स डिग्री प्रोडक्सन
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ११, २०७४, १५:४३:५८